Virgo July 2018 Ntughari ọnwa - Horoscope Isiokwu
Isi Horoscope Isiokwu Virgo July 2018 Ntughari ọnwa
Virgo July 2018 Ntughari ọnwa
Ọnọdụ mmetụta uche nke ọnwa Julaị a ga-agafe n'elu ụlọ mana nke a bụ n'ezie ihe dị mma nye gị, ezigbo Virgo. Ga-erite uru site na nnukwu oge gị na ndị nọ gị nso na ikekwe ị ga-enweta mmechi gbasara ụfọdụ ihe ndị a na-azaghị.
nwoke aries nwoke aris nwanyi mma
Dị ka o kwesịrị ịdị, dị ka Ọkọchị, ị ga-enwe ọtụtụ nchegbu banyere ihe oyiyi gị ma nwee ike itinyekwu oge na-eme ihe ndị nwere ike ịme gị mma, ịzụ ahịa gụnyere.
Nke a apụtaghị na ị na-emegharị anya niile n’ihi na a ga-enwe ọtụtụ oge ntụgharị uche, ụfọdụ n’ime ha ga-eweghachi nnukwu mkpughe.
Nke a bụ oge dị mma iji lekwasị anya na mkpa nke ezinụlọ gị yana ị nwere ike ịchọta onwe gị n'ọnọdụ ịkwado mmadụ gbasara mkpebi ndụ dị oke mkpa.
Ekwela ka iwe ju gị obi, n'ihi na nke a nwere ike bụrụ mkpali mbụ gị. Ọ dịghị amasị na ị ga-ekpebiri ha, naanị ị ga - eche echiche ma kpughee ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ ị nwere ike ịchọta.
Meziwanye! N'ime oge nke abụọ nke ọnwa a gbara gị ume igosipụtakwu mmetụta uche na-arụ ọrụ kwa ma gosipụta na ị bụ onye na-atọ ụtọ ma nwee ọmịiko, n'azụ ụdị ọkachamara ahụ.
Na-ege ndị ọzọ ntị
Izu izizi nke ọnwa Julaị na mbido na ịba ụba nke ịba ụba na ntakịrị ọbara oyi dịka ọ dịka ị na-eleghara mmetụta gị ma ọ bụ arịrịọ ọ bụla nke ndị gbara gị gburugburu anya, ọ ga-emekwa ihe ziri ezi, ọbụlagodi na nke a nwere ike imetụta gị Ọzọkwa.
Ọ pụtakwara na omume ọma ga-aga n'ihu na 5Nke, dị ka n'okpuru Anyanwụ trine Jupita akụkụ nke ntụkwasị obi gị onwe gị na-eto ma ndụ ime mmụọ gị.
Are na-enwe afọ ojuju na ohere ndị a na-enye gị mana etinyekwaghị anya na ogologo oge.
TOP ND TMỌD of nke ọnwa: Ọzọ trine nke Sun, oge a na Neptune , na-eme na 8Nke, ga-elekwasị anya na mmetụta uche gị na nke a bụ mgbe ndị ọzọ nwere ike iji gị mee ihe. Ọ dị ka ị na-achọ ịkwụ ụgwọ maka mkpebi ndị gara aga ma ugbu a ị na-elekwasị anya na ndị mmadụ na mmetụta ha.
A ga-etinye mkpa gị n'otu akụkụ mana ọ dabara nke ọma, ọ gaghị enwe nnukwu isi ihe ị ga-eme. Anyanwụ ahụ na-acha ọkụ na 12Nkega - ahụ ka uche gị na - awagharị ma ọ ga - abụrịrị na ọ kachasị mma ị ga - abụ ọnwa a.
Obi ụtọ na-adịgide adịgide na ntakịrị ihe ama ama ga-akpụ akpụ na ndụ gị ma nwee ike bụrụ ihe kacha mkpa. N'ihi na a eklips bụ na-emegide Pluto , ị nwere ike ịchọpụta na ọ dị gị mkpa ịgbanwe ihe na ndụ gị.
Ebe ihe ịrịba ama ndị ọzọ nwere ike ịdị na-elekwasị anya na ndụ ha, ma ọ bụ ihe oyiyi ha ma ọ bụ ụlọ ha, ị ga-enwe mmasị karịa ịgbanwe ihe dị na onye òtù ọlụlụ gị ma ọ bụ onye ọzọ n'ime ezinụlọ.
Dị ka ihe ịrịba ama dị mkpa ma na-eleru anya na ị bụ, ọchịchọ gị imeziwanye ndị ọzọ agaghị ekwe ka ohere a dapụ.
Astrological akụkụ nke ọnwa: Akụkụ Venus trine Saturn na-arụ ụka na 14Nkega-eme ka ikpo ọkụ ahụ dị na mmekọrịta gị ma nwee ike ịnwe ụmụ amaala na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye ka ha dịkwuo njikere ịkwado njikọ na-adịte aka ma ọ bụ kpalie ọbụbụenyi na nduzi nke ịhụnanya.
Gị onwe gị maa mma
Ihe dị ka etiti ọnwa na-arụ ọrụ nwere ike ibute nsogbu ma ọ nwere ike iju gị anya na enweghị nkwado ị nwere ike izute.
Nke a abughi ihe gbasara onwe gị ka ị ghara iwere ya dị ka nke a, ọ bụghị tupu ị wepụta oge iji ghọta mkpali nke onye ọ bụla. O nwere ike ịbụ na ndị mmadụ enweghị mmasị n’ihi na ọ bụ oge ọkọchị na onye ọ bụla nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa.
Ihe Venus ihe na-eme ka Jupita na-eme ihe na 22ndga - erite uru na ndị Virgos ndị dị njikere ịbanye na ndụ mmekọrịta, na ọkwa dị mkpirikpi. Oge a bụ oge dị mma iji mee ka ndị ọzọ zụrụ gị.
Jiri amara gị na-adọta ndị na-achọ ịlụ nwanyị ma ọ bụrụ na ha alụghị di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ soro di gị ma ọ bụ nwunye gị gaa njem ịhụnanya. Nke a bụ n'ezie oge kachasị mma maka ọnwa maka ezigbo izu ike na njem.
Lee anya! Ikwesiri ịkpachara anya na ego gi n'ihe gbasara ịghara ịdaba na wayo mana o bughi ego ole ị jiri aka gi na emefu. Ọ dịghị mkpa ịnwa itinye ihe dabara na ihe ndị ọzọ ị hụrụ.
Gee ntị na ndụmọdụ ịhụnanya ahụ n'ihi na a ga-agbanyekwu okpomọkụ n'oge okpomọkụ site na Venus trine Pluto akụkụ na 27Nke, nke ga-eme ka i nwekwuo mmek oah u ot your ui si enwe mmek oah u kamakwa o na-ab ugh i echiche efu na ihe oj oo e mere.
Na-agbakwunye n'elu na Mercury ga-agagharị n'oge ahụ, n'ezie enwere ọtụtụ ihe mere ị ga-eji hapụ ntakịrị.
Enwekwara ọnwa na-amị n'ọnwa na njedebe nke ọnwa, nke bụ ihe mmetụta mmụọ na-emetụ n'ahụ ka ị wee nwee ike ịkpachara anya ka ị daa n'ịhụnanya n'oge ụbọchị ole na ole ikpeazụ nke ọnwa Julaị n'ihi na ị nwere ike ige gị ntị ntakịrị. maka ọdịmma gị, n'okpuru akụkụ a.
Lelee Virgo Horoscope 2019 Amụma Key
Style Aries na-agba ọsọ: Na-akpali akpali ma nwee ntụkwasị obi
Onye siri ike Taurus-Gemini Cusp Nwoke: E gosipụtara Àgwà Ya
Kedu afọ chinese bụ 1984
ndị amụrụ na Jenụwarị 8
ihe akara bu july 2
akara zodiac maka disemba 1st
ihe akara bu jan 21